Manontany Ny Bilaogera Hoe Nahoana No Mbola Hita Anaty Boky Ao Trinite Sy Tobago ny Fampanambadiana Ankizy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Mey 2016 7:56 GMT
“Fanambadian'ny Ankizy 14 tapitrisa [maneran-tany]…nefa tsy maintsy milalao ny karatra izay nozarainao ianao”. Sary lalao tsobato ao Port-au-Prince, Haiti, avy amin'ny Fampandrosoana Mieritreritra, izay manohana ny asa ao amin'ny www.girlsnotbrides.org amin'ny ezaka hamarana ny fampanambadiana ankizy. Sary nampiasaina nahazoana alàlana avy amin'ny CC BY 2.0.
Mitohy ny adihevitra manodidina ny fampakaram-badin'ankizy tao Trinite sy Tobago taorian'ny filazan'ny filohan'ny Fikambanam-Pivavahana IraisamPinoana (IRO) tamin'ny herinandro lasa fa ny fanjakana tsy tokony hanova ny Lalànan'ny Fanambadiana satria ” tsy mamaritra ny fahamatorana ny taona”. Mbola ara-dalàna ny fanambadian'ny ankizy eo amin'ny nosin'ny repoblika roa – na dia nekena tamin'ny taondasa niainga avy amin'ny 16a taona hiakatra 18 taona aza ny taona fanekena hanaovana firaisana ara-nofo – ary mbola ataon'ny Haindò sy ny Silamo sasany (izany fampanambadiana ankizy izany).
Mbola manitikitika ny sain'ny bilaogera maro ny fifanoheran-kevitra hita. Nilaza ny bilaogy Square Peg (Lavaka Boribory) hoe :
Amin'ny maha olom-pirenena mieritreritra sy mangoraka eto amin'ity firenena ity, mihorin-koditra aho fa – amin'ny taonan'ny Tompontsika 2016 – dia mila miadihevitra isika raha tokony ho ara-dalàna ho an'ny ankizy ny hivady. […]
Raha mitady fanantenana amin'ny fanavotana ny tenany ny IRO alohan'ny handehanan'ny olom-pirenena marani-tsaina amin'ny lôjikan'ny firenena mankany amin'ny fanadinoana, dia mila miala tanteraka amin'io fomba fijery lany andro sy mampanahy io avy hatrany izy.
Nanaiky ny bilaogy keepinganemptycup raha manao ny tenany ho “zanakavavin'i Sanatan Dharma” (ilay fikambanana Haindò lehibe ao Trinidad sy Tobago) izy :
Hentitra aho eo anatrehan'izany toe-javatra mampihori-koditra izany dia ny fanambadian'ny ankizy ary manosi-bohontanana izany tsy misy nenina. Tsy olan'ny taona sy fahamatorana ihany izany, fa averina indray, olan'ny fahefana.
Ny fifehezan'ny lehilahy haindò ny vatan'ny vehivavy sy ny ankizivavy no aretin'ity rafi-pinoana ity nandritra ny taonjato maro. Na dia teo aza ny fivavahana tamin'andriamanitra vavy izay mpiady, mpamelona sy ny toy izany, dia nisy ny vinavina manome vahana ny lahy ho lohany fa tsy maintsy fehezina amin'ny fomba hentitra ny vehivavy sy ny zazavavy; manana andraikitry ny ray, avy eo ny vady, ary avy eo zanakalahy isika. Lasa olona tsinontsinoavina, alavirina, ankahalaina, ampitahorina na baboina ny vehivavy tokan-tena. Noho izany, hita ho toy ny fomba iray ahafahana mitazona ny vehivavy ‘hanaraka ny tsipika (filaharana)’ ny mariazy”. Niainga avy amin'ny fahantrana sy ny hevi-diso ny amin'ny fandisoan-kevitra ny atao ny ‘haratsin'ny’ fananahan'ny vehivavy ny fisian'ny fampanambadiana ankizy.
Nandà ny tena antony ijoroan'ilay fomba fanao ho ekena ny bilaogera satria anisan'ny fomba amam-panao ara-pivavahana izany, ka nanao hoe: “fotoana izao hitsanganana sy hanaovan'ny vehivavy Haindò hiaka hoe TSIA amin'ny asa sy ny lalànan'ity rafitra manome vahana ny ray, sy ny lalàna efa lany andro tsy mitombina sy entina anararaotana”.
Efa ho an'arivo taonany no nisian'izany Sanatan Dharma izany satria nivoatra ilay izy […] Izany no antony maha-sarotra ho ahy ny tena hahatakatra ny hoe nahoana ny ‘lehilahy matanjaka, mafy hatoka ‘, no mitanisa ny lalànan'ny Dharma, mahatakatra ny fivoaran'izao tontolo izao, afaka mipetraka avy eo amin'ny satro-boninahitry ny tsi-fahalalàna ary manambara fa “ekena” ny fanambadiana ankizy , satria efa nanao izany efa hatry ny ela isika … hitantsika fa efa nanao izany izahay razana’. Maro tamin'ny razantsika ihany koa no nisotro zava-pisotro misy alikaola sady namono ny vadiny, midika ve izany fisotroan-toaka sy herisetra an-tokantrano izany fa tokony ho ekena, ary mbola tokony hotohizana?
Entina fotsiny izao hanehoana ny halehiben'ny ahiahin'ireo lehilahy fa tsy manaraka intsony ny anjara toerana nipaingoran'ny rafitra manome vahana ny lehilahy intsony ny vehivavy sy ny ankizivavy .
Nandanjalanja ihany koa ilay bilaogera Darren J. Glenn :
Noho izany: tokony hahatakatra aho izany fa amin'ny taona 2016, ao amin'ny repoblika lahika sy demaokratika, dia eo am-pelantanan'ny vondrom-piarahamonina ara-pivavahana ny maha-ara-dalàna, ny fanoratana ary ny fankatoavana ny fanambadiana. Miezaka ny fanjakana mandamina ny fanambadiana aorian'izany, saingy mihetsika ho fahefana voalohany eo anatrehan'ny fandaminana sy ny paipaika ny fikambanana na/sy vondrom-piarahamonina.
Izany tokoa ve no ataontsika?! Ankoatra ny maha-lalàna an-tokatrano tsy misy varany azy, dia mitana ity fomba fanao ity ho mampidi-doza aho. Miorim-paka amin'ny hoe te- ho fanjakana maoderina isika ary tiana ho hita ho mitana ny fanevan'ny zon'olombelona, fa manandratra ny lalàna izahay amin'ny toerana mety ho mora afenina ny fampahoriana. […]
Ny fanontaniako ho azy ireo dia hoe: inona no manome azy ireo ny zo hiteny momba ny lalàm-bahoaka? Iza no miraharaha izay tsy maintsy holazainy? Nahoana ny resadresaka mifototra amin'ny maoraly sy ny teolojia eo anivon'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pinoana ao Trinite sy Tobago no mahamarika ny fiantraikany tahaka izao ao amin'ny tontolon'ny fanaovantsika lalàna?
Raha mbola eo ampandinihina ny amin'ny fanafoanana ny lalàna ny fitondrana amin'izao fotoana izao, dia mbola hita fa ny feon'ny fikambanana ara-pivavahana no manan-danja kokoa eo amin'ny raharaha ara-panjakana sy ny resaka lahy sy vavy .